Homerun: စည်းလုံးမှုပုံစံ KDE | Linux မှ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, applications များ, GNU / Linux များ
ငါကပရိတ်သတ်မဟုတ်ဘူး စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအကယ်၍ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်၌ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာများစွာရှိပြီးသူကကျွန်ုပ်၏ interface သည်နက်ဘွတ်ခ်ကဲ့သို့သောဖန်သားပြင်လျှော့ထားသောကိရိယာများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုစဉ်းစားပါက။
လူများစွာသိလိမ့်မည် KDE ဒါကြောင့်အတော်လေးတူသောအချက်မှစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်တစ်ချက်ပျောက်ဆုံးနေသည်။ အိုးနှင့်မှန်ဘီလူး။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ပြသထားသောနေရာဖြစ်ပြီး application များ၊ ဖိုင်များနှင့်အခြားသူများကိုကြီးမားသောသင်္ကေတများဖြင့်ပြသရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။
ကောင်းပြီ၊ ဟိုးမား, ပြည့်စုံသောမျက်နှာပြင် Launcher ကို tab များ၌ဖွဲ့စည်းသည်။
YouTube ပေါ်ရှိစာရေးသူတစ် ဦး ၏ Screencast ကိုသင်ကြည့်နိုင်သည်။
con ဟိုးမား ကျွန်ုပ်တို့သည် install လုပ်ထားသော application များကိုကြည့်ရှု။ ၎င်းတို့ကိုစတင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပင်မစာမျက်နှာမှလျင်မြန်စွာကြည့်ရှုရန်အကြိုက်ဆုံးစာရင်းထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။
ဟိုးမား ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးနေရာများ / ဖိုလ်ဒါများကိုစာရင်းပြုစုပြီး၎င်းတို့ကိုဖြတ်သန်းသွားလာရန်ခွင့်ပြုသည်။ "Favorite Places" အပိုင်းရှိအရာတစ်ခုကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဤဖိုလ်ဒါရှိအကြောင်းအရာများကိုစာရင်းပြုစုလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဖိုင်မန်နေဂျာကိုအသုံးပြုစရာမလိုဘဲစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖွင့်ရန်ဖိုလ်ဒါများကို ဖြတ်၍ သွားနိုင်သည်။
ဗားရှင်း 0.1.0 ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ download.kde.org။ အဆိုပါ Git Repository မှာဖြစ်ပါတယ် ပရောဂျက် ပြီးတော့လည်းရှိပါတယ် PPA ၏အသုံးပြုသူများအဘို့ Kubuntu.
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: KDE Userbase
အထူးသဖြင့်ငါမျှော်လင့်ပါတယ် ဟိုးမား ငါ့ကိုစွန့်ပစ်။ ၊ KDE ကွန်ရက်စာအုပ်အကြောင်း, ၏ session ဖြစ်ပါတယ် KDE ငါ့အမြင်အနေဖြင့်တော်တော်လေးမကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်သည်ဤထုတ်ကုန်များအတွက်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » ဟိုးမား - Unity-style KDE
ahhaha Chevere .. Kde အသုံးပြုသူတစ်ယောက်မှဒီလိုလုပ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ငါက mandriva / rosa မာရသွန်နှင့်တူသည်ကိုငါသိ၏
အများကြီး, ဒါပေမယ့်ငါ mandriva နှင့်အတူထွက်ခွာသွားပါတယ်
ငါက Unity နဲ့ KDE ကိုမနှစ်သက်တဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် Ubuntu နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုသတိရတယ်။ ငါဒါကို KDE နဲ့စမ်းလားစမ်းကြည့်ပါ့မလား။ ငါတကယ်တော့ Fedorian ပါ။ Nice app ။
ကောင်းပြီ၊ ငါ Xfce အတွက်ဗားရှင်းမကြာခင်ထွက်တော့မယ်၊
ယခုငါစဉ်းစားသောအခါ, Homerun ငါ့ကို Homer Simpson အများကြီးသတိပေးနေပါတယ်။
hehehehe, ငါပြောတူညီတဲ့, ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘူး။
ဒါဆို Unity ကကောင်းတယ်။ ငါကဒီဆောင်းပါးရေးသားသူကိုဝေဖန်မှုလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ငါပြောတာကတခြားပတ်ဝန်းကျင်တွေကနေယူနီယံနဲ့အတူပြုခဲ့တာကယူနိုက်တက်ဟာသာယာလှပလာလိမ့်မယ်၊ သုံးစွဲသူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့မမှားပါဘူး။ Unity သည်အခြားဖြန့်ဝြေခင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသူတို့လက်ခံသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေငါ @Jlcmux နှင့်သူသဘောတူသည်မှာသူသည် "မည်သည့် KDE အသုံးပြုသူသည်ထိုသို့ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုမထင်မှတ်" ဟုပြောခြင်းကိုကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ တစ်ခုခုအတွက် GNOME အသုံးပြုသူများသည် Shell (သို့) Classic (GNOME) ကိုဆက်လက်အသုံးပြုကြလိမ့်မည်။ MATE, Cinnamon (သို့) မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်များသည်အသုံးပြုသူများသည်ထိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုစီ၏အသုံးပြုသူများဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်တစ်ချိန်ချိန်တွင် Unity နှင့်တူလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ Ubuntu ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါမသိဘူး…
KDE ရဲ့သာလွန်ကောင်းမွန်မှုကသင် Unity ကဲ့သို့ menu ကိုကြိုက်လျှင်တစ်ချက်နှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။ သင် win7 သို့မဟုတ် xp type menu launcher ကိုနှစ်သက်ပါက၎င်းသည်တစ်ချက်နှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။ gnome2 နှင့်ဆင်တူသောအရာတစ်ခုကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၎င်းသည်သင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကို monolithic မရှိကြပေ။
kde ကိုရွေးချယ်သူများသည်၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္becauseာန်ကြောင့်၊ themes များဖြင့်အောင်မြင်နိုင်သည်၊ ဘာကိုလုပ်နိုင်သည်ဆိုသည်မှာ ((user == development)? ဆက်လက်: + = «နီးပါး») ဘာကြောင့်လူတွေကလူတွေဘာကြောင့်လို့ထင်တာလဲမသိဘူး။ ပေးထားသောအနိုင်ရရှိ!
rodolfo arguello ဟုသူကပြောသည်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, အစအ ဦး ၌စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်မနှစ်သက်သော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့ပြီး၎င်းတွင်ကောင်းမွန်သောအရာများရှိသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္likeာန်ကိုခံစားခြင်းနှင့်အခြားသူများကိုကျွန်ုပ်မနှစ်သက်သောအရာသည်၎င်း၏မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုခြင်း (သို့) ယင်း၏လုပ်ဆောင်မှုသည်မကောင်းလျှင်ကြည့်သည်။ ဒါပေမယ့်သိပ်ကောင်းတယ်၊ သူတို့ gnome shell ကိုသိပ်မမှီဘူးဆိုရင်ငါပိုကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
rodolfo arguello အားပြန်ကြားပါ
Homerun သည် Plasma Netbook ကိုဤနေရာတွင်အစားထိုးပြီးဖြစ်သည်။ သာ။ ကောင်း၏။
ကိုယ်ကြိုက်တယ် !! ငါခဏအသုံးပြုသည် ငါနောက်ခံအဖြစ်အသုံးပြု, ငါမျက်နှာပြင်ပုံထားခဲ့ပါ
အိုး !! ဘယ်လိုပြုမူလဲ။ ဘယ်လိုစားသုံးမှုနှင့်အခြားသူများပါသလဲ
ငါသည်အခြား application launchers များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကြီးမားသောကွာခြားချက်ကိုသယံဇာတသုံးစွဲမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရ။ ၎င်းသည်အတော်လေးတည်ငြိမ်သည်။
Tools menu အတွက် window menubar (kdeplasma-applets-menubar) ကိုသုံးပါ။
နောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ Kubuntu လား Arch လား။ XDD
ငါစိတ်ပျက်စရာကောင်းသည် hahaha၊ ငါ chakra လိုဂိုနှင့်အတူ "bundle manager" xD ပေါ်လာသည်။ vicky က dolhpin ၏ navigation bar မှဖြတ်သန်းသွားသော "အနက်ရောင်လိုင်း" ကိုကြိုက်ခဲ့သည်၊ သင်မည်သို့လုပ်ခဲ့သနည်း။ 🙂
x11tete11x သည် Bespin ရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Bespin Configure ၏ပြသနာကိုကျော်လွှားရန်ဖြစ်သည်
စကားမစပ်, သင် panel ကိုအပေါ် tools တွေကို menu ကိုတင်ထားတာလဲ
1) Bespin ရဲ့ Xbar နှင့်အတူ
၂) Plasma-widget-menubar (Canonical appmenu) ဖြင့်
"Window Menubar" ဟုခေါ်သည့် plasmoid ကိုရှာဖွေပါ (ဆိုလိုသည်မှာ @ vicky ၏စခရင်ရိုက်ချက်ကိုဆိုလိုလျှင်) ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်စာမူကိုဖတ်ကြားခြင်းမရှိပါ။ အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ် xD တွင်မည်သည့်အရာကိုတွေ့မြင်လိုသည်ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုလိုပါသည်
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ dope လိုငါထင်တယ်၊ ဒါက2clicks xD လုပ်ခြင်းဖြင့် activated သော KDE "find and run" လှုပ်ရှားမှုနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်
KDE တွင် netbook များအတွက်အထူးဖွဲ့စည်းမှုရှိသော်လည်းအမှန်တရားသည်စွမ်းဆောင်ရည်သာမက၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ခက်ခဲသည့်အတွက် (၎င်းကိုကျွန်ုပ်စွန့်ပစ်ခဲ့သည့်လက်တော့ပ်တစ်ခုတွင်သုံးလကြာအသုံးပြုခဲ့သည်) မှအမှန်တကယ်လိုချင်သောအရာများစွာကျန်ရှိနေသည်။ အများကြီး။ တက်ဘလက်တွေအတွက်ဗားရှင်းလည်းရှိတယ်။ အများကြီးပိုကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုပြproblemsနာမရှိဘဲ desktop ဒါမှမဟုတ် laptop PC တွေမှာ install လုပ်လို့မရဘူး။
ဤ "launcher" သည် screen optimization ပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး netbook များအတွက်အထူးသဖြင့် desktop PC မှလွဲ၍ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ငါစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုနှစ်သက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်သေးငယ်တဲ့ဖန်သားပြင်တွေအတွက်အမှန်တရား၊ ဒီ "launcher" ကဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုနောက်လှည့်ကွက်တစ်ခုထားပေးတယ်။
ငါအဲဒါကို ၀ င်းဒိုးတွေဖယ်ရှားတော့မယ့် netbook မှာစမ်းသပ်မယ်။ အဲဒါကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ဖို့ KDE နဲ့ HomeRUN ကိုငါတင်မယ်။
အဲ့တာမှန်တယ်။ အလုပ်မှာ HP Mini မှာ Netbook session ကိုသုံးဖို့ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကပိုကောင်းတယ်။
သူတို့ကငါ့ကို GDome-Xfce အသုံးပြုသူဖြစ်လို့သူတို့ကငါ့ကိုသွေးဆောင်မှုထဲကျအောင်လုပ်ဖို့ KDE ကိုကြိုးစားစမ်းကြည့်နေတယ်။ ဂျာမန်စားပွဲတစ်ခုထက်ပိုပြီး၊ အဲဒါဟာကျွန်တော့်ကိုဒါဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စားပွဲခုံတစ်ခုလို့ခံယူထားပြီးပြီ။
Slackware 14: အနဂါး Down